Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha Sayda : Tsy nifona izany izahay tsy nitaingina
Isan’ny nanaitra tamin’ny resaka nataon’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy (Mama sôsy) tao amin’ny fandaharana «Tsy ho tompon-trano mihono», omaly, ny filazany fa efa nifona taminy daholo ireo olona sy mpanao gazety rehetra namoaka ilay raharaha Sayda izay niteraka resabe eto amin’ny firenena. Tsy fantatra moa hoe iza marina ireo nifona tamin’i Mama sôsy fa ny azo antoka aloha dia mandainga ny minisitry ny serasera satria raha ny tato amin’ny La Gazette de la Grande île aloha dia tsy nisy na mpiasa iray aza ka nifona tany aminy, ary tsy mieritreritra ny hanao izany mihintsy.
Raha nisy anefa ny namoaka sy niresaka an’io raharaha Sayda io voalohany dia ny La Gazette de la Grande île, ary izay no antony nametrahany fitoriana ny gazety. Amin’ny fomba ahoana moa no handeha hifona amin’i Lalatiana Rakotondrazafy izahay kanefa tsy nitaingana azy akory ? Rehefa nanontaniana koa ny mpanao gazety namana sasany izay niresaka ity raharaha ity, dia nilaza izy ireo fa tsy nifona tany amin’i Mama sôsy izany mihintsy fa fanadiovan-tena fotsiny no nataony. Mbola manaporofo izany fa mandainga ny mpitondra tenin’ny governemanta raha nilaza fa efa nifona tany aminy daholo ireo rehetra namoaka ny raharahan’izy sy Sayda.
Foana ny fandaharana “tsy ho tompon-trano mihono”
Feno roa taona izao ny fandaharana “tsy ho tompon-trano mihono” ao amin’ny haino aman-jeri-panjakana izay ataon’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy na i Mama sôsy. Tsiahivina ihany fa isaky ny zoma atoandro, manomboka amin’ny 1 ora sy sasany ity fandaharana ity izay natao ho fampahafantarana ny vahoaka ny asan’ny fitondram-panjakana amin’ny ankapobeany. Satria moa i Lalatiana Rakotondrazafy no voatendry ho mpitondra tenin’ny governemanta dia izy tenany hatrany no miteny ao anatin’ny fandaharana. Izany indrindra no antony mahatonga ny olom-pirenena maro hilaza fa lasa fananan’i Mama sôsy manokana ny haino aman-jeri-panjakana.
Rehefa tena mihaino na mijery ny fandaharana anefa dia hita fa lasa fanadiovan’i Lalatiana Rakotondrazafy tena fotsiny ary lasa fandokafany tena. Na inona na inona zava-misy eto amin’ny firenena, tsy maintsy resaka mikasika ny ministeran’ny kolontsaina sy ny serasera no mibahan-toerana ao anatin’io fandaharana io. Tsy vitan’izay ihany fa mbola mamafy lainga sy manasa atidohan’olona ihany koa ramatoa minisitra ao amin’ny haino aman-jeri-panjakana, isaky ny zoma atoandro. Manoloana izany trangan-javatra izany indrindra, tokony ho foanana any ity fandaharana “tsy ho tompon-trano mihono” ity satria tsy natao hanadiovan’i Mama sôsy ny tenany sy handokafan-tena ny Televizionina Malagasy. Raha toa ka tsy ho foanana ny fandaharana dia ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Pierre Houlder no tokony hatao miteny ao satria mpitondra tenin’ny governemanta ihany koa ny tenany.